Fitsidihana tetsy Andralanitra :: Nahavelom-panantenana an'ireo mponin'ny Akamasoa ny hafatry ny Papa • AoRaha
Fitsidihana tetsy Andralanitra Nahavelom-panantenana an’ireo mponin’ny Akamasoa ny hafatry ny Papa
Horakora-pifaliana sy hirahira no nitsenan’ireo olona maro be ny fahatongavan’ny Papa Fransoa, tetsy amin’ny Akany Akamasoa (Andralanitra). Nitso-drano sy nampahery an’ireo kamboty sy sahirana ara-pivelomanana miisa dimy arivo sy roa alina mahery monina eny amin’ny Akany Akamasoa izy nandritra ny fitsidihana nataony, omaly tolakandro.
“Hafaliana lehibe ho ahy ny fahatongavana eto. Endrika maneho ny maha eo amin’Andriamanitra ny fisian’ny Akany Akamasoa. Aza miravirary tanana manoloana ny voka-dratsy ateraky ny fahantrana ianareo, aza manaiky ho resin’ny fakam-panahy fa tsy lahatra ny fahantrana. Mijoroa ho maodely amin’ny ady amin’ny fahantrana sy ny fanilikilihana ara-piarahamonina. Mitaky ezaka sy filofosana izany ary aza hadinoina ny mivavaka hatrany”, hoy izy.
Naneho ny hafalian’izy ireo tamin’ny alalan’ny tehaka sy fanofahofana ny sainam-pirenen’i Vatikana sy Madagasikara ireo mponina ao amin’ny Akamasoa. Nivoitra tamin’ny fitafian’izy ireo ny loko mena sy fotsy, ny mavo ary ny mavokely. Naka endrika sary fo kosa ny fomba fizarazaran’izy ireo nipetraka tamin’ny seza raha notazanina teny ambony.
Nisaotra manokana ny mompera Pedro, mpanangana ny Akany Akamasoa ny Papa Fransoa, ka nanolotra mari-pankasitrahana ho azy. Namaly izany fihetsiky ny Papa Ray Masina izany ny mompera Pedro, ka tabilao misy sary hosodokon’ny Papa Fransoa eo anoloan’i Akamasoa no nomeny azy. Tonga nanome voninahitra an’ity fitsidihina masina ity ry zareo avy eo anivon’ny governemanta sy ny Fiadidiana ny repoblika, notarihin’ny Filoham-pirenena Rajoelina Andry mivady.
Notsiahivin’ny Papa manokana sady nampahafantarany ny hafaliany tamin’ny fihaonany indray tamin’ny mompera Pedro, izay efa mpianany tao amin’ny Seminera, tany Arzantina, tamin’ny taona 1967-1968.
Ivandry :: Niatrana ny mpitandro filaminana sy ny mpamonjy voina